कम चर्चाका उत्कृष्ट लेवनडोस्की- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
कम चर्चाका उत्कृष्ट लेवनडोस्की
बायर्न — रोबर्ट लेवन्डोस्की टोटनहमविरुद्धको युरोपेली च्याम्पियन्स लिगमा फेरि एकपल्ट छाउन सफल रहे । बायर्नले टोटनहमकै घरेलु मैदानमा प्राप्त गरेको ७–२ जितमा उनले दुई गोल गरे । उनले यस सिजन खेलेका १० खेलमा १४ गोल गरिसकेका छन् । यो सबै खाले प्रतियोगितामा उनले गरेको गोल सख्यालाई जोडेर हो ।
यस्तोमा प्रश्न उठ्छ, के यी पोलिस खेलाडी विश्वकै सर्वाधिक राम्रा फरवार्ड हुन् त ? कि उनी निकै राम्रो खेलाडी भएर पनि कम चर्चा पाइरहेका छन् ?
जर्मन बुंडेसलिगामा उत्कृष्ट खेलाडीको कुनै कमी छैन् । जस्तो, सन् २०१६ मा टिमो आर्वनरले आरबी लेपजिपका लागि अनुबन्ध गरेयता ९९ खेलमा ५५ गोल गरिसकेका छन् । बोर्सिया डर्टमन्डका लागि गत सिजन पाको अल्सेसरले प्रत्येक ९० मिनेटमा एक गोल गरे । तर पनि यिनै खेलाडीको भीडमा पनि लेवनडोस्की सर्वाधिक उत्कृष्ट देखिन्छन् । त्यसैले त उनी जर्मन लिगको पछिल्ला चार सिजनमध्ये तीन अवसरमा उतकृष्ट फरवार्ड चुनिएका छन् ।
वार्नर र एल्सेसरले एकआपसमा जति गोल गरेका छन्, त्यसको भन्दा बढी गोल लेवनडोस्कीको नाममा रहेको छ । उनको खेललाई लिएर सबैभन्दा ठूलो पक्ष के भने उनले लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका छन्, एक सिजन पछि अर्को सिजन । तर प्रश्न जति धेरै लियोनल मेसी र क्रिस्टियोना रोनाल्डोको हुन्छ, त्यत्तिकै बराबरीका खेलाडी अथवा त्यसको छेउछाउको खेलाडी भएर लेवनडोस्कीले भने किन निकै कम मात्र चर्चा पाउँछन् त ?
कम्तीमा एउटा तथ्यमा के सहमती जनाउन सकिन्छ भने बुंडेसलिगामा पछिल्लो समयका सर्वाधिक उत्कृष्ट फरवार्ड अरू कोही होइन, लेवनडोस्की नै हुन् । यस्तोमा भन्न कर पनि लाग्छ, उनी विश्वकै एक उत्कृष्ट फरवार्ड पनि हुन् । युरोपका सर्वाधिक ठूला ५ लिग हुन्, बंडेसलिगासँगै स्पेनका ला लिगा, इंग्ल्यान्डको प्रिमियर लिग, इटालीको सिरी ए र फ्रान्सको लिग वान । त्यहाँका प्रमुख खेलाडीसँग तुलना गर्दा पनि लेवनडोस्की उत्तिकै राम्रा छन् भनेर दाबी गर्न सकिने ठाउँ छन् ।
लेवनडोस्कीको उति साह्रो चर्चा नहुनुको कारण उनले बुंडेसलिगाकै लागि बढी खेल्नु पनि हुन सक्छ । एउटा ठूलो मान्यता के छ भने चर्चाको शिखरमा पुग्ने हो भने स्पेनतिर खेल्नु पर्छ । त्यस अगाडि इटालीमा खेल्दा पनि त्यस्तो उपलब्धी प्राप्त हुने गथ्र्यो । अचेल इंग्लिस फुटबलले पनि त्यत्तिको हैसियत राख्छ । बुंडेसलिगामा बढी रुमलिएर पनि उनको जति चर्चा हुनु पर्ने हो, त्यति नभएको हो । उनी सन् २०१४ मा बायर्न आएका थिए ।
त्यस अगाडि उनले अर्को जर्मन क्लब बोर्सिया डर्टमन्डका लागि खेल्थे । उनी त्यति साह्रो चर्चामा नरहनुको कारण उनको सालिन व्यक्तित्व पनि उत्तिकै कारण छ । उनी प्राय: विवादमा परिरहन्न् । खालि राम्रो खेल्छन्, बायर्नलाई जिदाउन मदत गर्छन्, अनि चुपचाप । फेरि उनको देश पोल्यान्ड पनि विश्व फुटबलमा उति साह्रो सफल टिम होइन । पोल्यान्ड विश्वकपमै छनोट हुन संघर्ष गर्ने टिम हो । यस्तोमा मार, यिनै लेवनडोस्कीलाई परिरहेको छ ।
प्रकाशित : आश्विन १९, २०७६ ०८:३०
के मेसी र रोनाल्डो युग सकिँदै ?
(लन्डन) — - इमलेन बेग्लीयुरोपेली फुटबलले सातौं सिजन छुँदा लियोनल मेसी र क्रिस्टियानो रोनाल्डोले एकआपसमा आफ्नो क्लबका लागि तीन गोल मात्र गरेका छन् । मेसी र रोनाल्डोको जोडी त्यही हो, जसले पछिल्लो एक दशकको विश्व फुटबलमा एकछत्र राज गरेको छ । उनीहरूले एक आपसमा १ हजार ३ सय ६९ गोल गरेका छन् ।
अनि एकआपसमा १० पल्ट बेलन डे’अर जितेका छन् । त्यति मात्र होइन, उनीहरूले संयुक्त रूपमा नौ पल्ट च्याम्पियन्स लिग पनि जितेका छन् ।
मेसी अहिले ३२ वर्षका भए र उनले बार्सिलोनाका लागि पहिले जस्तो खेल्न सकिरहेका छैनन् । यसका प्रमुख कारण उनले बोकिरहेको धेरै थरीको चोट नै हो । अनि युभेन्ट्सका पोर्चुगाली स्टार ३४ वर्षका भए । अचेल उनी पनि सर्वाधिक गोलकर्ताको उपाधिका लागि प्रत्यासी हुन छाडेका छन् । के यो सबैले देखाउँछ त, विश्वफुटबलमा मेसी र रोनाल्डोको युग सकिँदै छ भनेर ? के विश्वकप फुटबलमा उनीहरूले कायम गरेको आधित्प अब पातलिँदै छ त ?
केही पनि स्थायी हुन्न । सन् २००५–०६ यता मेसी र रोनाल्डोले एक आपसमा मिलाएर पनि सबैभन्दा कम गोल गरेका छन्, सेप्टेम्बर ३० सम्मलाई आधार मान्दा । गत सिजन ११ वर्षयता पहिलो पल्ट उनीहरूले बेलन डे’अर पनि जित्न सकेनन् । भलै मेसीको भागमा पर्‍यो, फिफा वर्ष खेलाडीको उपाधि । सन् २०१०–११ यता मेसीले सबै खाले प्रतियोगितामा ४ सय ७६ खेल खेलेका छन् । युरोपका प्रमुख पाँच लिगमा कसैले पनि यति धेरै खेले खेलेका छैनन् ।
यो मामिलामा रोनाल्डो तेस्रोमा पर्छ, ४ सय ५२ खेलसहित । तर यही मेसीले यसपल्टका सिजनका सात ला लिगा खेलमा सबै जोडेर जम्माजम्मी ९० मिनेट मात्र खेलेका छन् । उनलाई चोटले खुबै सताइरहेको छ । इन्टर मिलानविरुद्ध युरोपेली च्याम्पियन्स लिग खेलमा भने उनी फर्के । मेसीलाई आफ्नो पूरा खेल जीवनमा चोटले बारम्बार सताएको छ । उनीले केवल एकै सिजन मात्र यस्तो बिताएका छन्, जसमा चोटको समस्या रहेन् ।
अब मेसी लिगमा सबै बाँकी ३१ खेल खेल्ने हो भने उनले सन् २०१३–१४ यता सबैभन्दा कम लि खेल खेल्नेछन् । अबको केही लिग खेल गुमाउने हो भने उनले सन् २००७–०८ यता पहिलो पल्ट सबैभन्दा कम खेल्नेछन्, लिगमा । यी सबैका बावजुत पनि गत सिजन उनका लागि राम्रै रह्यो, उनले ५० खेलमा ५१ गोल गरे । त्यसैले पनि उनले फिफाको उत्कृष्ट अवार्ड पाएका हुन् । तर १ सय २० मिनेटमा अहिलेसम्म कुनै गोल गर्न नसक्नु चिन्ताको विषय भने हुन सक्छ, मेसीका समर्थकका लागि ।
गत सिजन रोनाल्डोले पनि चोटका कारण धेरै खेल्न सकेनन् र यो सन् २०१४–१५ यता सबैभन्दा कम रह्यो । गोलको संख्यामा पनि उनी गत सिजन धेरै पछाडि परे । त्यस सिजन उनले ४३ खेलमा २८ गोल गरे । अरू खेलाडीको प्रसङ्ग थियो भने पनि यो उत्कृष्ट मानिन्थ्यो, तर रोनाल्डो जत्तिको खेलाडीका लागि यो पक्कै पर्याप्त होइन । तर यो पनि उनले म्यानचेस्टर युनाइटेड छाडेर रियल म्याड्रिड आएयता सबैभन्दा कम हो ।
फेरि सन् २०११–१२ यता पहिलो पल्ट मेसी अथवा रोनाल्डोमध्ये कसैले पनि युरोपेली च्याम्पियन्स लिग जित्न सकेन् । गत सिजनको सिरी ए मा उनले सर्वाधिक गोल गर्ने सूचीको चौथो स्थानमा रहे । उनको अगाडि रहे, साम्पडोरियाका फाबियो क्वागिरेला । तर रोनाल्डोको खेलमा कमी आउन थालेपनि विश्वास गर्न सकिन्छ, उनले अझै धेरै गोल गरेका छन् । यसको राम्रो उदाहरण त उनले पोर्चुगल र युभेन्ट्सका लागि खेलका पछिल्ला खेलमा देखाइसकेका छन् ।
‘मेसीले ४० वर्ष पुग्दासम्म खेलिरहेका हुने छैनन्,’ स्पेनी फुटबल पत्रकार गुलेम बालागले केही समय अगाडि भनेका थिए । यी अर्जेन्टिनी खेलाडीको बार्सिलोनासँग सन् २०२१ सम्म अनुबन्ध छ । पछिल्लो समय हल्ला के छ भने त्यो अनुबन्ध अनुसार मेसीले कुनै पनि समय बार्सिलोना छाड्न सक्छन्, आफ्नो इच्छा अनुसार । खासमा के भनिएको छ भने उनी आफ्नो खेल जीवनको अन्त्यतिर अर्जेन्टिनामा खेल्न चाहन्छन् ।
त्यो पनि आफ्नो बच्चा बेलाको क्लब न्युवेल्स ओल्ड ब्वाइजका लागि । ‘अहिले मेसी ३२ वर्षका भए । उनी नजिकका केहीले सायद अब बार्सिलोनामा उनले खेल्ने दुई वर्ष जत्ति मात्र बाँकी रहेको कुरा गर्न थालेका छन् । मैले यस्तो सुनेको पहिलो पल्ट हो,’ बालागले भने, ‘अब प्रत्येक सिजनको अन्त्यमा उनी आपैंmले आपंैmलाई परीक्षण गर्नेछन्, कति फिट छु भनेर । सायद मेसीको मनको कुनै कुनामा विश्वकप छ । उनको अनुबन्ध २०२१ सम्म छ, त्यसको अर्को वर्ष उनी विश्वकप खेल्न चाहन्छन् जस्तो छ ।’
बालाग के पनि मान्छन् भने विश्वकपका लागि भनेर मेसीले आउने केही वर्ष आरामले खेल्ने प्रयास गर्नेछन्, यसअघि जस्तो अब्बल दर्जाको फुटबलमा आफूलाई धेरै ब्यस्त राख्ने छैनन् । त्यसो भनेको सन् २०२२ को विश्वकप खेलेर आफ्नो खेल जीवनमा पूर्ण विराम लगाउने योजनाका रूपमा हेरिएको छ । रोनाल्डोले भने प्राय: भन्ने गरेका छन्, उनले कम्तीमा ४१ वर्षका उमेरसम्म खेल्नेछन् र त्यति बेलासम्म उनलाई शरीरले पनि साथ दिइरहेकै हुनेछ । तर प्रश्न के हो भने के उनी साँच्चै त्यो उमेरसम्म खेलिरहेको हुनेछ त ?
अर्को मेसी अथवा रोनाल्डो को हुनेछन् ?
यो प्रश्नको उत्तरमा सबैभन्दा बलियो प्रत्यासीका रूपमा देखा पर्नेछन्, केलियन एमबापे । यी फ्रान्सेली स्टार २३ वर्षका भए । उनले मेसी र रोनाल्डो दुवैलाई पछाडि छाडेर विश्वकप जितिसकेका छन् । उनी युरोपका प्रमुख पाँच लिगमध्ये एकमा सिजनकै सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडी पनि भइसकेका छन् । नउले मोनाको र पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) का लागि ६३ गोल गरिसकेका छन् । उनले प्रत्येक १ सय ४ मिनेटको अन्तरमा एक गोल गर्ने गरेका छन् ।
समग्रमा उनले सिनियर स्तरमा १ सय २ गोल गरिसकेका छन् । त्यसमा १३ च्याम्पियन्स लग गोल पर्छ, अनि १३ गोल उनको देशका लागि रहेको छ । त्यसपछि युरोपका प्रमुख पाँच लिगमा सर्वाधिक गोल गर्ने युवा खेलाडीमा पर्छन्, रियल सोसिडाडका २२ वर्षीय मिखेल आयारजबाल । उनले ३७ गोल गरेका छन्, प्रत्येक २ सय ९० मिनेटको अन्तरमा । बायर लेभरकुजनका केइ हाभटेज पनि नजिक छन् । उनले अहिलेसम्म २६ गोल गरिसकेका छन् ।
त्यति मात्र होइन, अरू धेरै युवा खेलाडी पनि छन् र उनीहरूमा पर्याप्त आक्रामक मनस्थिति देखिएको छ । जस्तो १६ वर्षीय अन्सु फाटी । उनले बार्सिलोनाका लागि खेलेको २ सय ३१ मिनेटमा दुई गोल गरेका छन् र एक गोलका लागि सहयोगी भूमिका निभाएका छन् । एटलेटिको म्याड्रिडका किशोर खेलाडी जाओ फेलिक्सले गत पसजन बेनफिकामा एक सिजन बिताउँदा २० गोल गरे । त्यो उनको लागि निकै सफल सिजन रह्यो ।
अनि १९ वर्षीय नर्वेली अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी इरलिङ हल्यान्डबारे के धारणा छ त ? लिड्समा जन्मेका उनले जर्मन फुटबलमा रेड बुल साल्बर्गका लागि १० खेलमा गरेको गोल संख्या १७ पुगेको छ । त्यसमा सर्वाधिक तीव्र गतिको ह्याट्रिक पनि पर्छ । जति बेला मेसी २३ वर्ष पुगेका थिए, त्यति बेलासम्म मेसीले ला लिगामा ८८ गोल गरिसकेका थिए । त्यही उमेरसम्ममा रोनाल्डोले गरेको गोल संख्या ५४ थियो । रोनाल्डोले विन्गरका रूपमा खेलेर पनि यति धेरै गोल गरेका हुन् ।
कीर्तिमान पछ्याउँदै मेसी
मेसी र रोनाल्डोले एक आपसमा गोलका धेरै कीर्तिमान आफ्नो नाममा लेखाएका छन् । तर अझै पनि त्यस्ता कीर्तिमान छन्, जसलाई छुन यी दुई खेलाडीले कडा मिहिनेत गर्नुपर्नेछ । मेसी ला लिगा, बार्सिलोना र अर्जेन्टिनाका लागि सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडी हुन् । यस्तै रोनाल्डोको नाममा रियल म्याड्रिड, पोर्चुगल र युरोपेली च्याम्पियन्स लिगमा यस्तै कीर्तिमान छ । रोनाल्डो ला लिगामै सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडीमा मेसीपछि दोस्रोमा छ ।
च्याम्यिपन्स लिगमा भने रोनाल्डोपछि मेसी आउँछन् । रोनाल्डोले पोर्चुगलका लागि ९३ गोल गरेका छन् र उनी अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा सर्वाधिक गोल गर्ने दोस्रो खेलाडी हुन् उनी अगाडि छन्, इरानी लेजेन्डरी खेलाडी अलि दाइ । रोनाल्डोको भन्दा दाइले १६ बढी गोल गरेका छन् । रोनाल्डोसँग उनलाई उछिन्ने अवसर छ । यस्तै रोनाल्डोसँग युरोपेली च्याम्पियन्स लिगमा सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडीको शीर्ष स्थानमा आउने मौका पनि छ ।
यसका लागि उनले उछिन्नु पर्नेछ, सन् १९५०–६० का लेजेन्डरी महान् खेलाडी फ्रान्सिस्को गेन्टोको नाममा रहेको कीर्तिमान । गेन्टोले रियल म्याड्रिडका लागि खेल्थे । रोनाल्डो यिनै खेलाडीभन्दा छ गोलले मात्र पछाडि छन् । रोनाल्डोले आफ्नो देशका लागि युरो २०१६ र सन् २०१९ को नेसन्स लिग जितेका छन् । तर मेसीलाई लिएर डर के छ भने कतै उनी आफ्नो देशका लागि कुनै पनि उपाधि जित्न नसक्ने खेलाडी हुने त होइनन् ?
प्रकाशित : आश्विन १९, २०७६ ०८:२७